Git Sangit News » उपत्यकामा भोलीबाट यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली, सबै प्रकारका पसल खोल्न दिईने ?
उपत्यकामा भोलीबाट यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली, सबै प्रकारका पसल खोल्न दिईने ?
काठमाडौँ उपत्यकामा निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र सबै प्रकारका पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खुला गर्ने तयारी भएको छ । जोबिजोर प्रणाली भोलिबाटै गर्ने अथवा अर्को हप्ताबाट गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको हो । उपत्यका प्रशासनले चौथो पटक निषेधाज्ञा थप्ने वा नथप्ने भन्ने विषयमा छलफल थालेको छ । मंगलबार दिउँसो साढे २ बजे काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुबीच भर्चुअल संवाद हुँदैछ ।
तर अझै संक्रमण नियन्त्रणमा नआएकाले पूर्ण रुपमा खुला गर्न नहुनेमा तीन वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकमत छन् । हालकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा पनि जनस्तरबाट वि’रोध हुनसक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले पनि नि’षेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउने गरी खाका प्रस्तुत गर्न भनेको छ । मंगलबारको संवादपछि निस्किने निष्कर्षबारे गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेलगायतसँग छलफल गरेर उपत्यकाको नि’षेधाज्ञाबारे निर्णय हुने स्रोतको भनाइ छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने, ‘हामी छलफलमा छौं, बुधबार मात्र नि’षेधाज्ञाबारे निर्णय हुनेछ ।’
नि’षेधाज्ञा वि’रुद्ध जनस्तरमा आ’क्रोश पैदा हुन थालेपछि गृह प्रशासनले यसलाई खुकुलो बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । प्रशासनले् मोडालिटी फेर्ने तयारी गरेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको हिसाबले नि’षेधाज्ञालाई कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने राय छ’, एक अधिकारीले भने, ‘तर ज्याला मजदुरी गरेर खानेहरुलाई बाँच्न गाह्रो पनि भएको छ । त्यसैले मुख्यतः आवश्यकता के हो भनेर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’
दुई वटा प्रस्ताव अघि सारिएको स्रोतले बतायो । पहिलो, एक साता नि’षेधाज्ञा थपेर रोजगारीका क्षेत्रलाई खुला गर्ने । दोस्रो, जोर–विजोर प्रणाली लागू गर्ने गरेर सवारी साधन पनि चल्न दिने । ४ भदौबाट जारी नि’षेधाज्ञाका कारण एक सातापछि संक्रमण दर पनि घट्दै जाने कतिपय प्रशासकको विश्लेषण छ । त्यसैले तत्काललाई उद्योग, कलकारखाना र पसलहरु स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर खुला गर्न दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
लतिलपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले संसदीय समितिमा भएको छलफलमा नि’षेधाज्ञालाई सजीकरण गर्ने तर दशैंसम्म लैजानुपर्ने सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसमा अन्य प्रशासक भने सहमत छैनन् । बरु दशैंसम्म जोर–विजोर प्रणालीलाई लम्ब्याउनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
प्रकाशित मिति २३ भाद्र २०७७, मंगलवार १५:५२